Fikradda Quruxda Dhismaha Tartanka loogu talagalay Ragga iyo Dumarka - Fikradaha Farshaxanka
Tartanka Tattoos waxay noqdeen waxa ay jecel yihiin kuwa taatuuga u leh si ay u muujiyaan royalty, hogaamin iyo awood. Haddii aad rabto inaad muujiso mid ka mid ah jilicyadan, ka dibna tattoo taajkii waa waxa aad u baahan tahay. Waxaa laga yaabaa inaad u maleyneyso inay tahay kaligii boqortooyo oo ku xiran tattoo taajka. Sawirrada "tattoos" waxay ku calaamadin kartaa waxyaabo badan oo kala duwan dadka kala duwan.
Tattoo tilmaaneed macnaheedu waa
Tattoo-celinta # waa mid gaar ah sababtoo ah waxaa loola jeedaa awoodda iyo awoodda Boqortooyada. Taajka waxaa loo isticmaalaa waxyaabo badan. Kuwa ka mid ah guryaha boqortooyadu waxay si fudud u aqoonsadaan tattoo taajka ah, maxaa yeelay waxay ku dhowdahay qalbiyadooda. Ma jiraan meelo adduunka ah in taajku uusan haysanin muhiimaddiisa. Wakiilka taajka ah #tattoo waa wax aan xitaa haweenku ku kici karin.
Tattoo-taajka ayaa loo isticmaali karaa inuu matalo hogaaminta. Kuwa la doorto waxay ku dhejin karaan tattooankan inay u sheegaan waxa ay yihiin. Tattoo-gu waa mid caadi ah waxayna ku dhiirrigelin kartaa dadka inay raacaan riyadaada. Waxaad runtii heli kartaa waxyiga aad u baahan tahay marka aad ku dhejisid shaati-galada jirkaaga. Waxay ka qaadataa madax-bannaanida qofka ku jira. Waxay ku saabsan tahay is-xakamaynta, waxayna sidoo kale ka hadlaysaa furfurnaanta qofka leh tattoo-ga.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo tattoo ah oo aad adigu tahay mid go'aamisa sida aad u rabto taajkaaga inuu u ekaado. Dhammaadka maalinta, taajku wuxuu u taagan yahay wax ka weyn oo ka sii macno badan oo aad ku qanci kartid.
Waxaa jira siyaabo badan oo aad u isticmaali kartid taajka si aad u muujiso farriimaha. Waad ku dari kartaa iskutallaabtaada taajkaada waxayna noqon doontaa guul. il image
Tani waxay ka dhigan tahay in iskutallaabta la rumeeysan yahay inay tahay ilaahi oo u horseedi doonta jihada saxda ah. Mid kasta oo ka mid ah taajku wuxuu u jeedaa waxyaabo kala duwan iyadoo ku xiran waxa uu qofku rabo inuu soo bandhigo. il image
Helitaanka tattoo taajkii waa la faraxsanaan karaa markaad ku darto kale # shaqo ku dhejis. Qayb ka mid ah jirka aad ku habeyn doonto tattoo-gaaga ayaa ah waxa lagu ogaanayo xajmiga iyo qaabka taajkaaga. il image
Waxaad sameyn kartaa bayaan aad u weyn marka aad samaynayso naqshad weyn oo ku saabsan dhabarka ama laabta. Ma jiro qayb ka mid ah jirka oo ah tattoo taajka ah ee aan ku haboonayn. il image
Waxaad midabyo u isticmaali kartaa midab qurux badan. Waa inaadan ka soo jeedin qoys madax ka ah in aad u isticmaashid naqshadahan quruxda badan sida tattookaaga. il image
Quruxda taajka waxaa laga arki karaa qayb kasta oo ka mid ah jirkaaga. Naqshadda taajkaada ayaa go'aan ka gaari kara adiga. Adiga ayaa ah inaad tifatirid taajkaaga qeybta jirka ee aad rabto. il image
Dad badan oo isticmaala tattoo marwalba way istaagaan marka ay soo baxayaan. Sida taataabooyinkan loogu talagalay dadka waa mid xiiso leh. il image
Marka ay timaado naqshadeynta tattoo gaar ah oo dhigi doonta dareen muuqaal ah oo kugu soo taagaya dadweynaha, tag tattoo taajir ah. il image
Waa inaad heshaa tattooist wanaagsan haddii aad rabto in aad ka fiirsato tayadaada leh taajkaaga. Maalin kasta ma aragno dad leh taajir. il image
Tani waa sababta aad u tegi lahayd marka aad raadineyso wax aan caadi ahayn ee naqshadaaga sawirkaaga il image
Sawirada "tattoos" waxay noqon kartaa qiyaaso iyo qaabab kala duwan oo ku xiran qaybta jirka ee aad rabto inay noqoto.
Markaad leedahay taaj mid ka mid ah qaybta jirka ee u furan dadweynaha, qeybtaas ayaa ah waxa aad si buuxda u fiirsaneyso inaad u baahan tahay. il image
Ma aha dhammaan shaatiinka aad arkaysid in ay yihiin kuwo qurux badan. Tattoos waxay u adeegi kartaa waxyaabo badan oo ku xiran qofka xiran taas oo ah sababta aan u aragno dad badan oo isticmaala tattoo. il image
Su'aasha ah inaad isweydiiso naftaada ayaa ah 'Sidee ayaan halkaan ugu soo galay?' Lamaane ayaa dhab ahaantii jeclaan doona nooca tattoo taajka ah. Waxaad xoojin kartaa noloshaada jacaylka marka aad ku dhejisid tattoo. Ma aha oo kaliya waxa loola jeedaa madaarka caanka ah, lamaanayaashu waxay ku noolaan karaan noloshooda jacaylkaas. il image
Habka sahlan ee looga jawaabayo su'aashan waa in lagu hubiyo tattoo aad raadineyso. Tattoo taajirku wuxuu u taagan yahay magaalo badan. il image
Maanta, isbedelka tattoosku waa sii kordhayaa, sidoo kale waxaa jira sababo kale oo aad ugu baahan tahay inaad naftaada u hesho. il image
Tilmaamyada Maskaxdu waxay u adeegi karaan xasuusin waa in laguula dhaqmo si ixtiraam leh. Dumarka ku leh tattoo taajka macnaheedu waa inay rabaan in loola dhaqmo si naxariis iyo ixtiraam leh. il image
Waxaan u sheegi karnaa inaan ognahay in taajiradu ay yihiin boqorrada iyo qoyskooda oo xiran kuwa u xilsaaraya awoodda iyo qawaaniinta qoyskooda gaar ahaan. il image
Tattoo-macmiilaha waxaa loola jeedaa xoog, madaxbannaan iyo is-xakameyn is-xakameyn. Marka lagugu qabto nooca nooca tattoo, waxaa laguu qaaday si aad u noqotid qof hufan. il image
Dumarka intooda badani waxay rabaan inay u baxaan taatikada iyo tayada awoodda leh ee sidan oo kale ah. Ma jirto qayb ka mid ah jirka oo aad ku dari kartid tattoo taajkii. il image
Marka ay timaaddo taajka iyo erayada, waxaad hubaal ka dhigan tahay in aad doonayso inaad gashid madadaalo dhamaadka maalinta. Waxaa jira goobo internet oo badan oo ka hadla meesha aad ka heli karto tattoo gaar ah. Hase yeeshee, waxaa muhiim ah in aad sameysid cilmi-baaristaada ka hor intaadan awoodin. il image
Tattoo-tintani waa naqshad jajab ah sababtoo ah sida qiyaasta qiyaasta tattoo u noqon karto. il image
Haddii aad ka fekereyso habka aad dadka u soo jiidaysid naftaada oo aadan haysan lacag, waxaad dharkaaga kor u qaadi kartaa oo aad gashan kartaa adigoon wax welwel ah lahayn. il image
Halkan riix halkan si aad u badan Crown Tattoos Design
tattoo dheemantattoos qabaa'ilkashimbir shimbirJoomatari Tattoosmuusikada muusikadasawirada gabdhahagadaal u laabotattoosgaraacista gacmahasawir gacmeedtattoos gacantatattoos sleevetattoos cagtalaabto laabtatattoo biyo ahtattoos moonTartoo ubax badanwaxaa la dhajiyay tattoostattoos saaxiib saxa ahshaatiinka shiidanjimicsiga bisadahatattoo tilmaanku dhaji tattooshenna tattoosawirrada raggatattoos qorraxdalammaanahaTattoos Wadnahalibto libaaxDhaqdhaqaaqataraagada kubbaddaTattoo infinitytattoo ah octopussawirada malaa'igtatattoos ubaxTattoo Featherkoi kalluunkacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoo maroodigatattoos eaglewaxay jecel yihiin tattoostattoos taajkiifikradaha tattootattoos iskutallaabtatattoos qosol lehTilmaamta jaalaha ahtattoo indhahanaqshadeynta mehnditattoos qoortaarrow Tattoo